Ny toetra mahafinaritra any Azia dia hampiseho anao eto amin'ny voninahiny rehetra: ny faritra avaratry ny firenena dia miaina ireo faritra amoron-tendrombohitra, ary ny morontsiraka dia tena paradisa. Ny Myanmar dia karazana tahirin-javakanto arakaraky ny fahitana ny hatsaran-tarehy tsara tarehy, fa koa ny toerana eo an-toerana. Misy harona sarobidy sy lova ara-kolontsaina mahagaga ao amin'ny tempoly bodista fahiny, mijery azy ireo toy ny hoe mahatsapa zavatra tsy takatry ny saina.
Misy toerana maro mahaliana ao Myanmar, ary toa tsy ho vita mihitsy ny lisitra ny zava-drehetra. Afaka miresaka momba ny sasany aminy ihany aza ianao mandritra ny ora maro. Noho izany dia hiezaka ny hamintina mazava tsara izay mendrika ny mahita any Myanmar aloha.
Top 10 tena mahavariana sy mahavariana ao amin'ny firenena
Bagan . Ny renivohitra fahiny dia antsoina hoe tanànan'ny fiangonana an'arivony. Angamba, Bagan (Pagan) no sangan'asa malaza indrindra any Myanmar. Misy trano fivavahana 2229 eto. Ny tempoly malaza indrindra dia ny Tempolin'i Ananda , ny pagoda Schwesigong, ny tempolin'i Tabinnyu. Izy rehetra dia voatahiry tamin'ny endrika tany am-boalohany, na dia mibaribary aza izy ireo ankehitriny.
Shwedagon Pagoda . Ny fo volamena volamena. Feno pagoda sy tempoly rehetra, eo afovoany misy kôpôsy lehibe iray. Eo amin'ny 100 metatra ny haavony, ary ny spire dia satroboninahitra vita amin'ny volamena madio, voaravaka diamondra sy vatosoa hafa. Araka ny filazan'ny angano, eto amin'ity toerana ity dia ireo sisan-taonan'ny Bouddha efatra. Io no foiben'ny fivahiniana ara-pivavahana sy ny fiainana ara-panahy ao amin'ny firenena.
Ny Pagoda Chaittio, na ny Stone Stone . Toerana masina hafa ho an'ny mponina ao Myanmar. Ao an-tampon'ilay tendrombohitra, vato lehibe iray no mibontsina ny lalana tsy azo lavina indrindra. Araka ny hevitry ny angano, tsy avelany hianjera ny volon'I Bouddha, izay voatahiry any am-paladian'ity loko ity. Eo amin'ny manodidina, ny vato dia voaravaka amin'ny takelaka volamena misy ravina, ary ambonin'izany dia misy tsangambato mitsangana 5,5 m avo.
Inle Lake . Ny lehibe indrindra amin'ny firenena. Eo amin'ny 1400 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina izy io ary mahatalanjona amin'ny hatsarany. Eo afovoan'ny farihy dia misy tempoly iray eo amin'ny trano fisakafoanana - ny Monastery of Cats, ary tanàna maromaro no mihazakazaka eny amin'ny morontsiraka. Eto dia azonao atao ny mianatra momba ny fomba fiaina sy fomban'ny mponina indizeny ao Myanmar.
The Mahamuni Pagoda . Tempoly iray tena mendrika tao Myanmar. Ao amin'ny pagoda dia mitahiry sarivongan'i Buddha 4 metatra, io ihany koa no tranainy indrindra. Araka ny voalazan'ny tantara, rehefa noforonina izy, dia i Gautama Buddha mihitsy no teo. Ny toetra dia ny vehivavy no voarara ny hikasika ny sarivongana, ary ny lehilahy, ho mari-panajana ny voninahitra, hamolavola izany takelaka volamena ravina. Ankoatra izany, ny pagoda ao Mahamuhi dia mitazona andian-jiolahy miavaka amin'ny 5 taonina.
City Mingun . Mirakitra reliquia maromaro ao Myanmar izy io, ary tsy azo atao mihitsy ny manavaka azy ireo. Azo antoka fa mendrika ny hanonona ny Pagoda Mingun Pathodogy, izay tokony ho tonga olo-malaza lehibe indrindra, saingy noho ny faminaniana mahatsiravina dia nijanona ny fananganana. Ao Mingun koa dia misy ny lakolosy mavesatra indrindra eto amin'izao tontolo izao. Maherin'ny 90 taonina ny lanjany. Ary ity angamba ny tempoly tsara tarehy indrindra any Myanmar - ny pelaka Synbume-Paya. Miseho eo anoloantsika amin'ny lokon'ny lanezy ny loko, ary ny antsipiriany rehetra dia mitondra loha-hevitra vitsivitsy. Eo afovoan 'ny pagoda dia mijoro ny tendrombohitra masina Mera, izay voahodidin' ny sisin-dambany.
Taung Kalat . Fahagagana hafa nataon'i Myanmar. Tendrombohitra volkano no misy azy io, ary misy tempoly Bodista. Misy tohatra 777 no mitarika azy. Avy any an-tampon'ny tendrombohitra no misy ny fomba fijery mahatalanjona any Bagan sy manodidina.
Ny tanànan'i Moniv . Ao anatin'ity lisitra ity, izy io dia mampifandray ireo toetran'i Myanmar, toy ny tranobe misy an'i Bouddha telopolo, ny sahan'i Bodhi arivo sy ny Tanbodhi pagoda. Etsy ankilan'izay dia misy sarivongana lehibe misy an'i Boddha miisa 90 metatra ny lavany. Ao anatiny misy galeria manontolo miaraka amin'ny sary maneho ny hevitra ara-pinoana momba ny helo sy ny paradisa, ary ao amin'ny Garden dia misy hazo bebe kokoa ary eo anelanelan'ny iray dia misy kely ny Bouddha. Tena mahavariana izany.
Caves of Pindaya . Toerana hafa fivahiniana masina. Tao amin'ireo lava-bato dia nanangona sarivongana Bouddha manodidina ny 8000. Noho izany, niezaka ny niaro azy ireo ny mponina tao an-tanàna noho ny fanenjehana ny tafika birmanina, ary tamin'ny farany dia nivadika ho toerana masina io toerana io. Eo amin'ny fidirana amin'ny lava-bato ny Shwe U Ming pagoda, ary mahatratra 15 metatra ny haavony. Ankoatra ny fasan'ny fivavahana, dia afaka mankafy koa ireo fanao voajanahary - stalactites ary farihy ambanin'ny tany.
Vehivavy tato ho an'ny foko Chin . Angamba ny singa farany ao amin'ny lisitra dia tsy ho toerana masina ara-pivavahana na fitiavan-karena. Ankehitriny, ireo dia vehivavy antitra miaraka amin'ny sary eo amin'ny tarehiny, hatramin'ny 50 taona lasa izay, fandrarana io karazana fomban-drazana io no navoaka. Vehivavy avy amin'ny foko Chin dia nalaza noho ny hatsaran-tarehiny, noho izany dia naparitak'ireo lehilahy avy amin'ny tanàna hafa izy ireo. Noho izany, ny fomban-drazana amin'ny sary hosodoko dia miatrika ny fampakarana ny hatsarany. Isan-taona, dia vitsy dia vitsy ny vehivavy toy izany, fa afaka mihaona amin'izy ireo any amin'ny tanàna kely misy lemaka lemaka lemaka.
Ny tanàna tsirairay ao Myanmar dia mitahiry sehatra iray miavaka miaraka amin'ny fomba fijery mahatalanjona, tantara manankarena ary angano mistery. Mazava ho azy fa samy hafa amin'ny heviny ara-pivavahana ny ankamaroan'izy ireo, indraindray dia toa manjavozavo izy ireo, saingy tsy izany no izy. Mahavariana ny toetran-dry zareo any Myanmar, ary gaga ny mponina ao an-toerana.
Fivoahana any Singapore
Ny ankizy dia mandoko amin'ny loko mainty
Tailandey amin'ny fitafiana 2013
Ny tuberculosis voalohany
Ohabolana momba ny lohataona ho an'ny ankizy
Fanamafisana sary 10 momba ny fisian'ny poltergeist
Wedding hairstyles ho an'ny volo lava 2015
The snail of rutin
Ny biography of Merlin Monroe
Miara-misakafo: Alec Baldwin manomana ny ho tonga raim-pianakaviana amin'ny fahadimy!
Hawaiian Beads amin'ny tanany
Inona no homena ny renibeko mandritra ny 80 taona?
Ny fitaovan'i Ilizarov
Ny kitapo lamaody indrindra